Mudanayaal iyo marwooyin. U diyaargarow dhacdo ka duwan wixii aad marqaati ka noqoteen. Waxaad tahay inaad la kulanto qaybta ugu fiican ee 2017 iyo 2018 (oo la soo saaray) - Xisaabinta NYE ee loogu talagalay Djs, Vjs, Nightclubs 2019
Mudanayaal iyo marwooyin. U diyaargarow dhacdo ka duwan wixii aad marqaati ka noqoteen. Waxaad tahay inaad la kulanto qaybta ugu wanaagsan ee 2016 iyo 2017 (soo saaro)
Laba tigal, 50,000 watts, iyo farabadan cabsida khamriga ah ... Waa wakhti ay ku bilawdaan 2018 qaab! (soo saaray)